Daraasad cusub oo shaaca ka qaaday "hab fudud" oo lagu dheereeyo nolosha aadamaha – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Daraasad cusub oo shaaca ka qaaday “hab fudud” oo lagu dheereeyo nolosha...
Daraasad cusub oo shaaca ka qaaday “hab fudud” oo lagu dheereeyo nolosha aadamaha
Dadku badanaa waxay u ordaan orodka si ay u ahaadaan jir, ama looga hortago miisaan korodh, laakiin daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujisay faa iido weyn oo lama filaan ah dhowaan la ogaadey.
Sida lagu xusay daraasadda lagu daabacay joornaalka ‘British Journal of Sports Medicine’, orodku wuxuu yareeyaa halista dhimashada, iyadoo aan loo eegin sababaha, taas oo macnaheedu yahay in isboortigani gacan ka geysto sii dheereeynta nolosha.
Akadeemiyada tacliinta sare ee Jaamacadda Victoria Australia waxay dib u eegeen tiro badan oo daraasado ah, cilmi baaris iyo warbixinno caafimaad si looga jawaabo su’aalaha adag.
Baarayaasha waxay soo bandhigeen 14 daraasad oo ay kujiraan in kabadan 232,000 oo qof waxayna kormeereen caafimaadkooda mudo ah 5.5 ilaa 35 sano, xiligaas oo 25,951 qof ay dhinteen.
Kadib markii si dhaw loo eegay xogta, waxaa la ogaaday in oroddu ay keentay in boqolkiiba 30 ay hoos u dhacdo halista dhimashada wadna xanuunka.
Orodku wuxuu caawiyaa gubitaanka kalooriga xad-dhaafka ah, sidoo kale wuxuu xoojiyaa lafaha iyo murqaha iyo joogtaynta miisaanka jidhka oo caafimaad qaba.
Daraasadda ayaa soo gabagabaysay in orodku faa’iido u leeyahay xitaa kuwa jimicsi sameeya, xaddidan, inta lagu jiro toddobaadkan, ee socodsiiya hal jeer usbuuciiba. Toddobaadka, ama 75 daqiiqadood oo firfircoonaan culus.
Previous articleXukuumadda Somaliland oo Soo Dhaweysay Go’aanka Geesimadda leh ee ay Gaadheen Beelaha Ceel-Afweyn
Next articleMaxaad kala Socotaa Khatarta Qaniinyada Masaska iyo Noocyadooda kala duwan.